Download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဘယ်လို - Windows အတွက်ရုရှားဘာသာစကား
ဤဆောင်းပါးသည် Windows7နဲ့ Windows 8 အတွက်ရုရှားဘာသာစကားဒေါင်းလုပ်လုပ်, ထိုသို့ default အနေဖြင့်အသုံးပြုသောဘာသာစကားတစ်ခုကိုလုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်မည်။ သငျသညျကအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းအတွက် download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်သောနေရာကိုတရားဝင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဆိုက်ကနေအခမဲ့အဘို့ကို Windows7Ultimate, ဒါမှမဟုတ် Windows 8 ကိုလုပ်ငန်း (ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်) ၏က ISO image ကို download လုပ်ပါလျှင်ဤသည်ဥပမာ, လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
အသံဝန်ဆောင်မှုကို run မထားဘူး - ဘာလုပ်ရမှန်း?
Windows ကို 10, 8.1, သို့မဟုတ် Windows7မှာအသံပြန်ဖွင့်နှင့်အတူပြဿနာများ - အသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်အကျော်ကြားဆုံးတဦး။ တစ်ခုမှာပြဿနာ - မက်ဆေ့ခ်ျ, အညီ, အသံမမှုစနစ် "အသံဝန်ဆောင်မှုကို run မထားဘူး" နှင့်။ ဒီလက်စွဲသည်ပြဿနာများနှင့်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများမကူညီဘူးဆိုရင်, အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုငျကွောငျးအခြို့သောအပိုဆောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြင်ပေးဖို့, ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ၌အဘယ်သို့ပြုရမည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါ။
ပလီကေးရှင်းကို Windows 8.1 Store မှ install လုပ်ထားကြသည်မဟုတ်
Windows 8 နှင့် 8.1 အသုံးပြုသူများကိုသင်စတိုးဆိုင်ကို Windows 8.1 ကနေ application များ download လုပ် install လုပ်ရန်ကြိုးစားသောအခါမကြာခဏအမျိုးမျိုးသောပြဿနာများရင်ဆိုင်ရဥပမာ, လျှောက်လွှာဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ငြင်းပယ်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေး, အမှားအယွင်းများနှင့်တူသောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူစတင်ပါဘူးရေးသားခဲ့သည်မပေးပါ။ ဒီလက်စွဲတွင် - စတိုးမှ apps များဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါပြဿနာတွေနဲ့အမှားအမှု၌ကူညီပေးနိုင်အထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်အချို့ (မသာမှာ Windows 8 အတွက်သင့်လျော်သော။
Windows7ကို install လုပ်ပြီးအစီအစဉ်များကို uninstall
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါအားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်အစီအစဉ်များ၏မှန်ကန်သော installation နဲ့ဖယ်ရှားရေးကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးဆောင်နေကြသည်, သူတို့အချို့ကြောင့်ပြုမိရဲ့ပုံကိုမသိကြပါ။ ဒါပေမယ့်စနစ်တကျ install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်ပတ်မှုစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏ဝေါဟာရကိုလျှော့ချရန်။
Windows7ကိုတစ်ဦးဘာသာစကားအထုပ် Installing
အထူးကိစ္စများတွင်ကွန်ပျူတာနှင့်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါသူ့ရဲ့ interface ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်လျော်သောဘာသာစကားအထုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ရဲ့အစမှာ Windows7တွင်ကြည့်ရှုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာကြစို့: ဘယ်လို Windows7ကိုတစ်ဦးဘာသာစကားအထုပ်ကို install ကို Windows 10 တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖို့ဘာသာစကားအထုပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အဆင့်သုံးဆင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်: Loading; installation ကို; လျှောက်လွှာ။
အစားကို Windows 10, Windows7ကို install လုပ်ပြီး
မိုက်ကရိုဆော့ဖပြီးသားနှစ်ခုအသစ်က operating system ကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, များစွာသောအသုံးပြုသူများကောင်းသောအဟောင်း "ခုနစ်" ကိုကျူးလွန်ရှိနေဆဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူနည်းနည်းပြဿနာလည်းမရှိလွတ်လပ်စွာ desktop ကို PC များ၏စုဆောင်းထားလျှင်, ဒီမှာ "များစွာ" နဲ့ကြိုတင်လက်ပ်တော့အပေါ်အချို့သောအခက်အခဲများရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်။
ပထမဦးဆုံး function ကိုအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်, ပေမယ့် (Windows 10 ကိုတစ်ဦးသော graphical password ကိုဝတ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်, တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်သိလျက်နှင့်မယ့်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအတော်များများက Android ပေါ်မှာအကျွမ်းတဝင်သော graphical password ကို, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ် အမည်ရထိုကဲ့သို့သော device များအတွက်) ။ အရင်ကဆိုရင်အဘို့ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် - Windows 10 ကိုတစ်ဦးသော graphical password ကို configure ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါကယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်သည်သင်၏ password ကိုဂရပ်ဖစ်မေ့လျော့နေလျှင်ဖြစ်ပျက်နဲ့တူလှပါတယ်။
Fix ရန်ကဘယ်လို - ဖိုင်တွဲသို့မဟုတ်ဖိုင်ပြောင်းပေးဖို့ SYSTEM ထံမှတောင်းဆိုမှုခွင့်ပြုချက်
ဖိုင်တွဲဖို့ access ကိုအဘယ်သူမျှမ: သင်မည်သည့်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကို Windows 10, 8 သို့မဟုတ် Windows7error message ကို delete သို့မဟုတ်အမည်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေတယ်ဆိုရင်။ သင်ဤစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဖိုလ်ဒါကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် "စနစ်က" မှတောင်းဆိုမှုခွင့်ပြုချက်, သင်အဆုံးအပါအဝင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ခြေလှမ်းများနှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာသရုပ်ပြအဖြစ်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် folder တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်နှင့်အတူလိုအပ်သောခြေလှမ်းများစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ disc ကို Windows 10 ကို 100 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာတက်နေတဲ့
Task Manager ကိုအတွက် disc ကို 100% loading နှင့်ရလဒ်အဖြစ်သိသာဘရိတ်စနစ်က - Windows 10 ကိုဖြစ်ပေါ်ပြဿနာများကိုတစ်ဦးကပိုပြီးမကြာခဏလည်ပတ်မှုစနစ်၏ယခင်ဗားရှင်းများတွင်ထက်ပုံရသည်။ အများစုကတော့ကြောင့်ရိုးရိုးစနစ်၏မှားယွင်းမှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်းမဟုတ်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘာမှ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့တခြားရွေးချယ်စရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်အတွက် Windows 10 အတွက် hard disk ကို drive ကို (HDD သို့မဟုတ် SSD) ကို 100 ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြဿနာကိုပြင်ပေးဖို့, ဒီအမှု၌ပြုပါရန်။
Windows ကိုပြန်လည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ယာဉ်မောင်းကို update ပြီးနောက် Skype ကိုများနှင့်အခြားအစီအစဉ်များမှ inverted လက်တော့ကင်မရာပုံရိပ် (နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းကို USB ဘျ) - များစွာသောအသုံးပြုသူမကြာခဏနှင့်ဘုံပြဿနာ။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သုံးရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်လိမ့်မည်: တရားဝင်ယာဉ်မောင်းကို အသုံးပြု. ကင်မရာများ၏က်ဘ် setting များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားပျက်ကွက်လျှင် - တစ် Third-party အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် (- သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်တတိယနည်းလမ်းမှသွားနိုင်ပါတယ်သင်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါ) ။
Windows ကိုယာယီဖိုင်တွေ 10 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အလုပ်အစီအစဉ်များ, ဂိမ်းများအဖြစ် Windows 10 ကိုများကဲ့သို့ယာဉ်မောင်းများနှင့်အမှုအရာကို install လုပ်ဖို့စနစ် update ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာယာယီဖိုင်တွေဖန်တီးနေကြသည်, သူတို့ကအမြဲတမ်းမဟုတျဘဲအားလုံးအလိုအလျှောက်ဖယ်ရှားပစ်ကြသည်မဟုတ်။ အရင်ကဆိုရင်အဘို့ဤလက်စွဲစာအုပ်ထဲတွင် Windows 10 ကို built-in system ကို tools များအတွက်ယာယီဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ရန်မည်သို့ခြေလှမ်းတို့က step ။
Windows အ Desktop ပေါ်မှာတစ်ဖြတ်လမ်း Create
မာကု - တိကျတဲ့လျှောက်လွှာ, ဖိုင်တွဲသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းမှလမ်းကြောင်းမှထွက်မသတ်မှတ်ထားတဲ့၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်။ တံဆိပ်များနှင့်အတူ, သငျသညျအစီအစဉ်များကိုပွင့်လင်းဖိုလ်ဒါ, နဲ့ Web စာမျက်နှာများကိုဖွင့်နိုင်ပါ။ ဤဆောင်းပါး၌, ရဲ့ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်များကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ Windows အတွက် shortcuts တွေကိုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သဘောသဘာဝခုနှစ်တွင် Shortcut ကိုဖန်တီးရန် - ပုံမှန်, extension ကိုလင့်နှင့်စနစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်, နှင့်အင်တာနက်ဖိုင်များ, ဝဘ်စာမျက်နှာကိုဦးဆောင်။
အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေစေရန်သို့မဟုတ်အလေ့အထများ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်သော်လည်း, အစားနားကြပ်ရဲ့ကွန်ပျူတာစပီကာကိုချိတ်ဆက်ရန်ပိုနှစ်သက်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများအပင်စျေးကြီးမော်ဒယ်များထဲမှာ, အသံအရည်အသွေးနှင့်အတူမကျေနပ်များမှာ - device ကိုမှားယွင်းစွာ configured သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမှာမပြုပြင်လျှင်မကြာခဏဒီဖြစ်ပျက်။
စီမံကိန်း rendering သို့မဟုတ်ရေးသားထား - နှစ်ခု PC များသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းပထမဦးဆုံး၏တနျခိုးအပြည့်အဝအလုပ်အတွက်စေ့စပ်ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဒုတိယကွန်ပျူတာ, Web surfing အဖြစ်ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်အသစ်ပစ္စည်းပြင်ဆင်နေ။ ဤဆောင်းပါး၌, ရဲ့တဦးတည်းမော်နီတာမှနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကွန်ပျူတာများကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
Windows 8 ကိုတစ်ဦး restore point တစ်ခုဖန်တီး
တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်, ဒါပေမယ့်စနစ်အတွက်အရေးပါသောကိစ္စရပ်များအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတတ်လျှင်, သင်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပြန်ပြောင်းနိုငျသောကွောငျ့အခြိနျမှနျမှထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပြုလုပ်ရန်, တစ်ဦး restore point တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပေသည်။ Windows 8 အရံသိမ်းဆည်းခြင်းအလိုအလျှောက်စနစ်ထဲသို့အသုံးပြုသူ user ကကိုယ်တိုင်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်၏ရလဒ်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့သည်။
Windows7ကွန်ယက် password ကို input ကိုကို disable
7 Windose အသုံးပြုသူများစနစ်ကွန်ယက် password ကိုရိုက်ထည့်ဖို့တောင်းကြောင်းဖြစ်သောပြဿနာတစ်ခု, ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီအခြေအနေကိုသင်တစ်ဦး network ပေါ်မှာ Printer Sharing ကိုဖွင့်ထားသောအခါဖြစ်ပေါ်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်အခြားဖြစ်ရပ်များရှိပါသည်။ ရဲ့ပေးထားသောအခြေအနေမှာပြုမူဖို့ဘယ်လိုနားလည်ကြကုန်အံ့။ ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပရင်တာဝင်ရောက်ဖို့ကွန်ယက် password ကိုပိတ်ခြင်း, သင်ပိုက်ကွန် "အလုပ်အဖွဲ့" သို့သွားနှင့်ပရင်တာကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးသောကာလကွန်ပျူတာ switched အခါငါဘယ်လိုသိလား
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏အသက်အရွယ်မှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်များကိုတဦးတည်းသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရရှိသွားတဲ့။ ကွန်ပျူတာများဒါခိုင်မြဲစွာသူတို့သည်အလွန်အဖိုးတန်နှင့်အတူအပ်နှင်းခဲ့ကြသည်, ငါတို့ဘဝတွေကို၌တည်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ပေးရန်, ကွဲပြားခြားနားသောစကားဝှက်စိစစ်အတည်ပြု, encryption ကိုများနှင့်အခြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းစနစ်များတက်ပါစေ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခိုးယူ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအာမခံချက်တဦးတည်းကိုမပေးနိုငျသညျ။
သင့်ရဲ့ PS3 ဂိမ်းဆော့ခလုတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်ပါ
PlayStation3 အပေါ်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်, အကို PC ပေါ်မှာထှကျလာသောသူအပေါင်းတို့သည်ခေတ်သစ်ဂိမ်းစဉ် DirectInput နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်ကုန်အမျိုးအစားမှသာ XInput နှင့်အတူထောက်ခံမှုအလုပ်ရည်ညွှန်းသည်။ အားလုံးပလီကေးရှင်းကိုမှန်ကန်စွာပြသ dualshok ၎င်းထိုသို့စနစ်တကျ configure လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာရန် PS3 ထံမှ DualShock ချိတ်ဆက်ခြင်း Dualshok "လေးထောငျ့ကှကျထဲက။ " ကို Windows နှင့်အတူအလုပ်ထောက်ခံပါသည်
Windows XP မှာအမှား RPC ဆာဗာကို fix လုပ်နည်း
RPC operating system ကိုဝေးလံသောကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ်အရံပစ္စည်းအပေါ်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ RPC စစ်ဆင်ရေးကျိုးသည်လျှင်, စနစ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းဆောင်တာသုံးစွဲဖို့နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ယင်းနောက်ရဲ့အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများနှင့်မည်သို့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
Windows Defender7enable သို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း
နောက်ခံလူ - Window7operating system ကို antivirus ကို component တစ်ခုအသင့်တပ်ဆင်ပြီး။ သင်တစ်ဦး Third-party developer အနေဖြင့် Anti-virus software ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်နည်းနည်းလက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုမှုရှိစဉ်ကတည်းက, က Defender အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ဖို့အသိစေသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စနစ်၏ကဒီအစိတ်အပိုင်းဟာအသုံးပြုသူရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲပိတ်ထားသည်။